အကြည့်တစ်ချက်နဲ့တင် လော့ခ်တိုင်းပွင့်နိုင်မယ်ဆိုရင်?? – DigitalTimes.com.mm
1783 Shares 494 Views
Apple ရဲ့ original iPhone တွေတုန်းကကြော်ငြာကိုမှတ်မိကြဦးမလား?? တချို့ကတော့ အဲဒီကြော်ငြာကို ရိုက်ဖူးသမျှစမတ်ဖုန်းကြော်ငြာတွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးတီဗီကြော်ငြာလို့လည်း သမုတ်ကြပါတယ်။ အကြောင်းရင်းက ဖုန်းမှာပါသမျှ feature တွေအကုန်လုံးကို တစ်ခုချင်းစီ ဖော်ပြရှင်းပြသွားတဲ့အတွက်ပါ။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီး Apple က သူ့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေနဲ့အတူ iPhone တွေရဲ့ဈေးကွက်ရှာဖွေနိုင်မှုကလည်း တော်တော်လေးသွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီတော့ ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကို အရောင်းမြှင့်တင်တဲ့အခါမှာ လူတွေရဲ့ဟာသကိုမြတ်နိုးတဲ့စိတ်ကို ဦးတည်ပြီး ကြော်ငြာတွေကိုရိုက်တတ်ပါတယ်။ အခုနောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ Apple iPhone X ကြော်ငြာဟာဆိုရင်လည်း Face ID ကိုအလေးပေးဖော်ပြဖို့ ဟာသဆန်ဆန်ရိုက်ကူးလိုက်တာပါ။
ကြော်ငာကပြချင်တဲ့သဘောကတော့ တကယ်လို့သာ ကမ္ဘာပေါ်ကရှိသမျှလော့ခ်တိုင်းကို အကြည့်တစ်ချက်နဲ့တင် ဖွင့်နိုင်မယ်ဆို ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတဲ့သဘောပါ။ Apple iPhone X မှာလို ရှိသမျှအရာတိုင်းကို အလွယ်တကူလော့ခ်ဖွင့်လို့ရခဲ့ရင်ဆိုပြီး Face ID ရဲ့မြန်ဆန်လွယ်ကူမှုကို အသားပေးရိုက်ကူးလိုက်ခြင်းပါ။ အောက်မှာ သူ့ရဲ့ ကြော်ငြာဗီဒီယိုလေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Updated News: Apple အနေနဲ့ Face ID နဲ့ TrueDepth ကင်မရာကို သူ့ရဲ့ iPad Pro မော်ဒယ်အသစ်တွေနဲ့ Apple iPhone SE2မှာတောင် သုံးလာနိုင်တယ်လို့ အရင်နေ့ကဗီဒီယိုထဲမှာ ဖော်ပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီနှစ်အတွင်း လာမယ့်၆လအတွင်းမှာ ထွက်ရှိလာမယ့် 5.8-inch iPhone Xs, 6.5-inch iPhone Xs Plus နဲ့ 6.1-inch iPhone (LCD model) တို့မှာလည်း Face ID ကိုသုံးလာနိုင်ပါတယ်။
Apple ရဲ့ original iPhone တှတေုနြးကကှောငြှာကိုမှတမြိကှဦးမလား?? တခွို့ကတော့ အဲဒီကှောငြှာကို ရိုကဖြူးသမွှစမတဖြုနြးကှောငြှာတှထေဲမှာ အကောငြးဆုံးတီဗီကှောငြှာလို့လညြး သမုတကြှပါတယြ။ အကှောငြးရငြးက ဖုနြးမှာပါသမွှ feature တှအကေုနလြုံးကို တစခြုခငြွးစီ ဖောပြှရှငြးပှသှားတဲ့အတှကပြါ။ အဲ့ဒီအခွိနကြစပှီး Apple က သူ့ရဲ့ထုတကြုနတြှနေဲ့အတူ iPhone တှရေဲ့စွေးကှကရြှာဖှနေိုငမြှုကလညြး တောတြောလြေးသှကလြာခဲ့ပါတယြ။ ဒီတော့ ကုမျပဏီအနနေဲ့ စမတဖြုနြးတစလြုံးကို အရောငြးမှငြ့တငတြဲ့အခါမှာ လူတှရေဲ့ဟာသကိုမှတနြိုးတဲ့စိတကြို ဦးတညပြှီး ကှောငြှာတှကေိုရိုကတြတပြါတယြ။ အခုနောကဆြုံးထှကလြာတဲ့ Apple iPhone X ကှောငြှာဟာဆိုရငလြညြး Face ID ကိုအလေးပေးဖောပြှဖို့ ဟာသဆနဆြနရြိုကကြူးလိုကတြာပါ။
ကှြေှာငာကပှခငွတြဲ့သဘောကတော့ တကယလြို့သာ ကမျဘာပေါကြရှိသမွှလော့ခတြိုငြးကို အကှညြ့တစခြကွနြဲ့တငြ ဖှငြ့နိုငမြယဆြို ဘယလြိုဖှစမြလဲဆိုတဲ့သဘောပါ။ Apple iPhone X မှာလို ရှိသမွှအရာတိုငြးကို အလှယတြကူလော့ခဖြှငြ့လို့ရခဲ့ရငဆြိုပှီး Face ID ရဲ့မှနဆြနလြှယကြူမှုကို အသားပေးရိုကကြူးလိုကခြှငြးပါ။ အောကမြှာ သူ့ရဲ့ ကှောငြှာဗီဒီယိုလေးကို ဖောပြှပေးလိုကပြါတယြ။
Updated News: Apple အနနေဲ့ Face ID နဲ့ TrueDepth ကငမြရာကို သူ့ရဲ့ iPad Pro မောဒြယအြသစတြှနေဲ့ Apple iPhone SE2မှာတောငြ သုံးလာနိုငတြယလြို့ အရငနြကေ့ဗီဒီယိုထဲမှာ ဖောပြှခဲ့ဖူးပါတယြ။ ဒီနှစအြတှငြး လာမယြ့၆လအတှငြးမှာ ထှကရြှိလာမယြ့ 5.8-inch iPhone Xs, 6.5-inch iPhone Xs Plus နဲ့ 6.1-inch iPhone (LCD model) တို့မှာလညြး Face ID ကိုသုံးလာနိုငပြါတယြ။
မောင်းသူမဲ့ ကားများက လမ်းသွားလမ်းလာများအား စကားပြောနိုင်မယ့် နည်းပညာ
ကိုယ်သေဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာ Facebook အကောင့်က ဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲ?